Dowladda Soomaaliya Oo Ku Dhawaaqday Xilliga La Aasayo R/wasaarihii Hore C/risaaq X. Xuseen – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Guddiga ka kooban labada gole ee dowladda federaalka ah u saartay qabanqaabada aaska Raysulwasaarihii hore ee Soomaaliya C/risaaq Xaaji Xuseen ayaa ku dhawaaqay goorta la aasayo marxuumka oo shalay meydkiisa laga soo qaaday dalka Mareykanka.
Kulan ay guddigu Muqdisho ku yeesheen kadib ayaa lagu go’aamiyey waqtiga iyo goobta uu aaska marxuumku dhici doono. Ra’iisul Wasaare kuxigeeka ahna Wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee Dowladda Federaalka Soomaaliya, Ridwaan Xirsi Maxamed oo xubin ka ah guddiga qaban qaabada aaska, ayaa sheegay in meydka marxuumka berri oo Jimce ah magaalada Muqdisho la keeni doono.
“Waqtiga marxuumka la aasi doono waa maalinta Jimcaha, waxaana lagu aasi doonaa magaalada Muqdisho, aaska waxaa kasoo qayb geli doona wufuud tira badan oo ka kala socota dalka iyo dibadda” ayuu yiri Wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee Dowladda Federaalka Soomaaliya, Ridwaan Xirsi Maxamed.
“Sida caadiga ah garoonka waxaa lagu diyaariyay habmaamuuseedkii loogu talagalay aaska Marxuumka, waxaa kaloo imaanaya oo aaska ka qeyb galaya Ehelada, iyo wafuud ka kala socota gobollada dalka iyo dibediisa” ayuu sidoo kale yiri Ridwaan Xirsi.
Wufuudda ka qeybgelaya aaska ayaa ka kala imaan doona dalalka Jabuuti, Kenya, Uganda, Itoobiya, Midowga Yurub iyo Maraykanka.
Sidoo kale waxaa aaska kasoo qayb geli doona madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya sida Puntland, Jubba iyo Gal-mudug.
Meydka Raysul wasaarihii hore ee Soomaaliya C/risaaq Xaaji Xuseen oo ku geeriyooday Mareykanka ayaa halkaas shalay meydkiisa laga soo duuliyey, waxaana wafdi ka socda dowladda Soomaaliya lagula wareejin doonaa dalka Turkiga.
Madaxweynaha Maamulka Puntlad Gaas Oo U Ambabaxay Muqdisho